Soulmate Uphi na? Indlela yokufumana nendlela ukuphanda
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Soulmate Uphi na? Indlela yokufumana nendlela ukuphanda
Soulmate wekamva, umzekelo, ngokuba abantu basoloko eqhelekileyo, ezifana ziyafana zokuzonwabisa, usoloko usiva ibali komdlalo ngokulula ukuba Demuke endaweni lokonwabela loo nto uyithandayo. Ngokuqinisekileyo, ndiya kuhlangana nabantu ezazihambisana ukuba uye kwindawo enjalo, kodwa oko akuthethi ukuba ukuhlangabezana iqabane umphefumlo.
kuyimfuneko ukwenzela ukuhlangabezana iqabane umphefumlo ukuba aye kuloo ndawo, kukuba omnye wachitha naliphi ixesha kuloo ndawo. Umzekelo, wada waya kwindawo apho uyithandayo kunandipha, apho ukuba ucele ukuya kumkhawulela, iya kwahluka umongo yokuqala. Ngokwahlukileyo koko, abo bantu babecinga ukuba ukonwabela uyithandayo kwi ngaphandle malunga Ekuhlanganeni kulula ukuba sidibana iqabane umphefumlo.
Oku kuthiwa kwenza kwacaca ngokunyaniseka ukuba ufuna ukuba ezabo. Ukuba inyani iimvakalelo zakho, xa nditshoyo, andithethi ukuba iqabane umphefumlo uthanda yimvelo eye endinomdla kuyo. iqabane umphefumlo
njani ukhangela? E
, okunene ndicinga kukho nayiphi na indlela ukuhlangabezana iqabane umphefumlo.
? ngokwam ukwamkela
Ngokomzekelo, kunokuba kuphela xa ubomi bam ihamba kakuhle, bekuya kuba kwiimeko ezininzi kusenokuba okanye buhlungu ayisebenzi. Ngale ndlela, kuquka icala elibi hayi HIV kuphela, makhe ndiyayamkela. Ngaloo ndlela kakhulu wakho uyaphila, oko kuya kunceda umdla iqabane umphefumlo. Ukuba une
? kwaye oko akusebenzi
ngoku buhlungu ukuba intsimi ebanzi lwembono, oku ngokupheleleyo ngokufuthi anqunyulwe ingqondo yabo kuloo nto. Noko ke, kukho intsimi ebanzi kwimboniselo batsale inyathelo elinye kuloo meko, lifikile ukuba kubonakale kwaye mcimbi oyintsobi phambili elandelayo. Waba amathuba ohlukeneyo kubonakala ukuba kunjalo, kufuneka ubone ukhetho ezininzi zendlela ukuhamba ukususela ngoku.
ukuba iqabane umphefumlo ukuba ufuna ukuhlangana, uze ube nomfanekiso oluthile olucacileyo, kuthiwa kungenzeka ukuba nazo. Xa ukwandisa amathuba kunye intsimi ebanzi lwembono, uya kukwazi ukubamba ngobuthathaka yokuba kukho abantu kufutshane ngokucacileyo kunye nemifanekiso.
abazigalela uthando badla ucinge ngezinto nje ingeniso kunye nelahleko, kuba oko yena okanye yena kule welinye icala, uye ucinge ukuba kum Buyisela welinye icala kangakanani. Nakuba kunjalo, akuthethi kwenzeka loo yoqhawulo-nokuba lixeshana iqabane umphefumlo, kufuneka ugalele uthando free. Kuphela yi ukucinga Ndinakwenza ntoni na ukuthintela umdlali wakho ukuba sonwabe, ndicinga sisiya kwakhona umgama phakathi iqabane umphefumlo.
ish bam ubomi kubalulekile
ngakumbi, kodwa sibonile ukuba indlela iqabane umphefumlo, nokuba nokwenza nayiphi na indlela, apho kwakufuneka ukuba lokuphila Rashiku wena yonke imihla. iqabane Soul Kungenxa yokuba elinye iqela esa kwi umphefumlo, ukuba akuyi kuphila ukushiya ukuba nam ndiye umphefumlo, kodwa umphefumlo ithuba esezantsi budibanisayo bangezi umntu.
ukuchitha yonke imihla banyanisekile nomphefumlo intliziyo yam, nibe ndlela kakhulu kufutshane iqabane umphefumlo.
Ngu ukucinga, ndicinga sisiya kwakhona umgama phakathi iqabane umphefumlo.